Posted on November 3, 2020 (November 4, 2020) by सेराेफेराे डेक्स
आफ्नै घरभित्र कोरोनासँग पैठेजोरीः कात्तिक ८ गते शनिवार विहान बुबा अचानक अचेत भइ लड्नु भएछ । भाइले मलाई फोन गरी ‘तुरुन्तै आउनु ! बुबा फेन्ट हुनुभयो’ भनेर बोलायो । म हतारिंदै घरमा पुगें । सबैको सल्लाह बमोजिम म र भाञ्जी डा. गीताले प्रभासस्थित लुम्विनी मेडिकल कलेज पु¥यायौं । अस्पतालमा हामीले २ दिन अगाडि ज्वरो आएर […]
पाल्पामा थप एक जना काेराेना सङक्रमितकाे मृत्यु भएकाे छ । लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास पाल्पामा उपचाररत रामपुर नगरपालिका ७ पाल्पाका ४४ वर्षीय एक पुरूषकाे मृत्यु भएकाे स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पन्थीले बताए । कार्तिक ५ गते सङक्रमण पुष्टी भएका उनमा अन्य समस्या समेत रहेकाे बुझिएकाे छ । यससँगै पाल्पामा काेराेनाका कारण मृत्यु हुनेहरूकाे […]
पाल्पामा भएको दुर्घटनामा घाइते भएका कोहोलपुर उद्योग वाणिज्य संघ, अध्यक्ष चक्र अधिकारी र रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष किशोर आचार्यलाई थप उपचारका लागि काठमाण्डौं लगिएकाे छ । साेमबार साँझ भएकाे दुर्घटनामा घाइते भएका दुवै जनाकाे अवस्था मध्यम रहेकाे र थप उपचारका लागि ह्याम्स अस्पताल काठमाण्डाैंमा लगिएकाे लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासले जनाएकाे छ । उनीहरूलाइ […]